खनिजयुक्त पानीको सेवनले ढाडको समस्या कम हुन्छ | गृहपृष्ठ
Home अन्तरवार्ता खनिजयुक्त पानीको सेवनले ढाडको समस्या कम हुन्छ
अन्तरवार्ता 406 views
खनिजयुक्त पानीको सेवनले ढाडको समस्या कम हुन्छ
डा. सरोजकुमार सुवाल अर्थोपेडिक सर्जन, मध्यपुर अस्पताल
सामान्यतया गर्दनको पछाडि (घिच्रो) र नितम्बबीचको मध्यरेखामा हुने दुखाइलाई ढाड दुख्नु भनिन्छ । मेरुदण्डका हड्डी र मांसपेशीलाई असर गर्ने रोगले ढाड दुख्छ । ढाड दुखाइकै कारण अधिकांशले काममा ध्यान दिन सक्दैनन् । नेपालमा गलत किसिमको खानपान, रहनसहन र बसाइले ढाड दुख्नेहरूको सङ्ख्या धेरै छ । समयमै उपचार गरे ढाड दुखाइ निको पार्न सकिने डा. सरोज सुवाल बताउँछन् । हामीले खाने पानी शुद्ध भए तापनि आवश्यक खनिज (मिनरल) तङ्खव नहुँदा हड्डीमा समस्या देखिने उनको भनाइ छ । जनवादी गणतन्त्र चीनको हुवेई प्रान्तस्थित याङ्गत्से विश्वविद्यालयबाट अर्थोपेडिक्समा माष्टर इन सर्जरी (एमएस) गरेका डा. सुवाल मध्यपुर अस्पतालमा अर्थोपेडिक सर्जनका रूपमा कार्यरत छन् । चीनकै चियामुसी विश्वविद्यालयबाट एमबीबीएस गरेका डा. सुवालसँग ढाड दुख्ने समस्या र समाधानका उयायबारे आर्थिक अभियानका पूर्णभक्त दुवालले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश :
ढाड दुख्ने समस्या के कारण हुन्छ ?
ढाड दुख्नुको मुख्य कारण गलत तरीकाले काम गर्नु वा बस्नु नै हो । ढाड वा नजीकको मांसपेशीमा असर परेर यस्तो समस्या शुरू हुन्छ । कुर्सीमा बसेर बढी समयसम्म काम गर्नेलाई ढाडको समस्या धेरै हुन्छ । एउटै ‘पोजिशनमा’ बस्दा पछाडिको मांसपेशी एकदमै थाकेको हुन्छ । ढाडलाई अप्ठ्यारो गरेर राखिराख्दा पनि मांसपेशी थाकेर ढाड दुख्छ । नेपालमा लामो समयसम्म बाइक चलाउने र दिनभर कम्प्युटर चलाउनेको ढाड दुख्ने समस्या धेरै देखिएको छ । बढी तौल हुनु पनि ढाड दुख्नुको अर्को कारण हो ।
आसन ठीक भएन भने पनि ढाड दुख्छ । लामो यात्राको समयमा समेत यो समस्या आउँछ । एउटै आसनमा २० मिनेटभन्दा धेरै बेर बस्दा वा जुनसुकै काम गर्दा पनि ढाड दुख्छ । यस्तो दुखाइलाई ‘मेकानिकल पेन’ भनिन्छ ।
शरीरमा कुनै रोग देखियो भने पनि ढाड दुख्छ । रोगका कारण दुख्ने दुखाइलाई ‘प्याथोलोजिकल पेन’ भनिन्छ । मांसपेशी र हड्डीको रोग वा ट्युमर, मिर्गौलाको पत्थरीले पनि ढाड दुख्छ । ढाडको अधिकांश समस्या मांसपेशी कमजोर भएर हुन्छ । नसासम्बन्धी र हड्डी खिइने समस्याले समेत ढाड दुख्छ ।
ढाड दुख्नबाट बच्न के गर्नुपर्छ ?
काम गर्दा समयसमयमा पोजिशन परिवर्तन गरिराख्नुपर्छ । केरा, अण्डा, माछामासु जस्ता ढाड बलियो बनाउने तŒव भएको खाना खानुपर्छ । शारीरिक क्रियाकलाप र व्यायाम नियमित गर्नुपर्छ । अत्यधिक भार अनुपयुक्त तरीकाले उचाल्नु हुँदैन । नमिल्दो आसनमा बस्नु हुँदैन । शरीरमा कुनै रोगको सङ्केत देखिनेबित्तिकै उपचार थाल्नुपर्छ । मिर्गौलामा पानी जम्ने, मिर्गौलाको पत्थरी, मूत्राशय तथा मूत्रनलीको तल्लो भागमा सङ्क्रमण आदिद्वारा तल्लो ढाडमा दुखाइ हुन सक्छ । त्यसैले, परीक्षण गरेर कारण पहिल्याई उपचार गर्नुपर्छ ।
ढाड दुख्न नदिन कस्तो खाना खानुपर्छ ?
क्याल्सियम र भिटामिनयुक्त खाना खानुपर्छ । यसैगरी दैनिक घटीमा ३ लिटर पानीको सेवन गर्नुपर्छ । खानेपानीमा मिनरल हुनैपर्छ । पानीमा न्यूनतम मात्रामा जिङ्क, म्याग्नेसियम, फोस्फरस र क्याल्सियम हुनुपर्छ । हामीले खाने खानामा पनि यी तŒव भएमा हड्डी मजबूत हुन्छ र हाड दुख्ने समस्या मुश्किलले मात्र देखापर्छ ।
ढाड दुखाइ कति किसिमका हुन्छन् ?
ढाड दुखाइ खासगरी तीन किसिमका हुन्छन् । १) माथिल्लो ढाड दुखाइ (सर्भिकल) २) बीचको ढाड दुखाइ र ३) तल्लो ढाड दुखाइ (लम्बर) । उमेर बित्दै गएपछि विशेषगरी सर्भिकल र लम्बर पेन हुन्छ । बीचको ढाड दुखाइ भने अन्य रोगका कारण हुन्छ । टीबी (क्षयरोग) र दुर्घटनाका कारण बीचको ढाड दुख्छ । तल्लो ढाड दुख्नुको कारण गलत बसाइ हो । झुकेर र निहुरेर काम गर्दा, लामो यात्रा गर्दा, कच्ची सडकमा बाइक चलाउँदा तल्लो ढाड दुख्छ । महिलाहरूमा भने महिला अङ्गकै कारण पनि ढाड दुख्छ ।
महिलाहरूमा ढाड दुख्नुको कारण के हो त ?
नेपाली महिलाहरू एउटै पोजिशनमा निहुरेर लुगा धुन्छन् । यो गलत हो । टेबलमाथि बाटा राखेर धुने गरेमा निहुरिनु पर्दैन । महिलाहरूमा ढाड दुख्नुको कारण सङ्क्रमण पनि हो । पाठेघर र ट्युमरका कारण महिलालाई ढाड दुख्छ । पाठेघरको मुखको क्यान्सर, पाठेघरमा हुने सङ्क्रमण, महीनावारीमा हुने हर्मोन गडबढीले समेत यस्तो समस्या आउँछ । यद्यपि, महीनावारीमा ५–६ दिनसम्म ढाड दुख्नु सामान्य नै हो ।
ढाड दुख्नुका अन्य कारण के के हुन् त ?
पिसाबमा सङ्क्रमण भएर पनि ढाड दुख्छ । सङ्क्रमण हुँदा ज्वरो आउँछ । १ हप्ताभन्दा बढी ज्वरो आएमा, पिसाब पोलेमा ढाड दुख्न सक्छ । दुर्घटनामा परेर र नसा च्यापिएर समेत डाढ दुन्छ । खोक्दा, हाँछ्यु गर्दा ढाड दुख्छ भने हड्डीको डिस्क (कुर्कुरे) खुस्केको हुन सक्छ । उमेर बढ्दै जाँदा स्पाइनल स्टेनोसिसका हड्डी खिइएर नसाघर खुम्चिन्छ । त्यसको प्रभावले पनि ढाड दुख्छ ।
ढाड दुख्नुका लक्षण र उपचार के हो ?
ढाड दुखिरहनु, आलस्य हुनु, जीउ कमजोर हुनु, थकान हुनु, शरीरमा गाँठागुठी हुनु ढाड दुख्नुका लक्षण हुन् । दुखाइको उपचार दुखाइ के कति कारणले भएको हो, सोहीअनुसार गर्नुपर्दछ । ढाडको दुखाइको पहिचान रक्त परीक्षण, मूत्र परीक्षण, एक्सरे, सीटी स्क्यान, एमआरआई आदि विभिन्न तरीकाबाट गर्न सकिन्छ । यदि नसा च्यापिएको छ भने अलि बढी ध्यान दिनुपर्छ । नसा च्यापिएको छ भने अन्य समस्या पनि आउँछ । १२ सातामा पनि ठीक भएन भने सर्जरी नै गर्नुपर्ने हुन सक्छ ।
हड्डी खिइएर भएको हो भने हड्डी रगडिएर नसा निस्कने बाटो साँघुरो हुँदै जान्छ । नसा च्यापिएपछि नसाहरू खुम्चिन्छ, जसले गर्दा मांसपेशी कमजोर हुन्छ । मांसपेशी कमजोर भएपछि बिरामीलाई दुख्छ । पाठेघरमा समस्या भए÷नभएको निक्र्योल गर्नुपर्छ । पिसाबको परीक्षणसमेत गर्नुपर्छ । कसैलाई स्थायी रूपमा ढाड पनि दुख्छ । यस्तो बेलामा बेलाबखत फिजियोथेरापी गरिरहनुपर्छ । यसले मांसपेशीलाई बलियो बनाउँछ ।
नसा च्यापिने समस्या कुरकुरे हड्डी फुटेर र हड्डी खिएर पनि हो । यो क्रोनिक खिइएर हुन्छ । यस्तो समस्या ६०–७० वर्ष कटेपछि मात्रै हुन्छ । तर, कुरकुरे हड्डी फुट्यो भने युवा उमेरमा पनि यो समस्या आउँछ । नसा च्यापियो भने खुट्टा झमझम हुन्छ ।
हड्डी दुखेमा बीएमडी (बोन मिनरल डेन्सिटी) परीक्षण गर्नुपर्छ । मध्यपुर अस्पतालमा २–३ हजार रुपैयाँमा यो परीक्षण हुन्छ । ६५ वर्षभन्दा माथिको ओस्टुपोरोसिस हुन्छ । यस बेला हड्डीको क्षमता खोक्रो भइसकेको हुन्छ । यस्तो बेला हड्डी जुनसुकै बेला पनि भाँचिन सक्छ । त्यसैले, हड्डीको परीक्षण समय समयमा गर्नुपर्छ ।
हड्डीको समस्यासँग धूमपानको केही सम्बन्ध छ कि ?
धूमपानले हड्डी धेरै कमजोर हुन्छ । धूमपानले हड्डीमा अक्टुब्लास्ट बन्न दिँदैन र हड्डी विकासमा ढिलाइ गरिदिन्छ । त्यसैले, हड्डी भाँचिएको बेला धूमपान गर्नु नै भएन । अरू बेला पनि गर्नु हुँदैन ।
हड्डीको परीक्षण कहिले कहिले गर्नुपर्छ ?
शरीरमा चोटपटक लाग्दा, शरीरमा कडा वा नरम खालका गिर्खा, गाँठो आएमा, हातखुट्टा लामो समयसम्म झमझम भइरहेमा हड्डी र नसाको परीक्षण गर्नुपर्छ । हातको काम गर्ने क्षमता कम भएमा र घाँटी दुखेमा पनि यस्तो परीक्षण गर्नुपर्छ । टाउकोको पछाडिपट्टिको भाग दुखेमा, रिँगटा लागेमा र लगातार ज्वरो आएमा हड्डी जँचाउनुपर्छ । यसैगरी क्षयरोग लागेका बिरामीले समय समयमा हड्डी परीक्षण गर्नुपर्छ । हातखुट्टा चलाउन समस्या भएमा, छालाको रङ परिवर्तन भएमा, शरीरको कुनै भागमा ट्युमर भएमा, हड्डीको प्रकृति फेरिएमा, जोर्नीको समस्या भएमा, बाथ र युरिक एसिड भएमा पनि बेला बेला हड्डी परीक्षण गर्नुपर्छ ।
२ बैशाख २०७५, आईतवार ११:०३
२६ चैत्र २०७४, सोमबार ०८:१६